मलेशियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने सुपरभाइजरद्वारा आत्मसमर्पण, कुट्ने कुटाइ खाने दुवै नेपाली – NepalajaMedia
August 4, 2020 1131
काठमाडौं, १९ साउन । मलेशियामा एक नेपाली सुरक्षा गार्डलाई अमावीय तरिकाले कुट्ने व्यक्तिले आत्मसमर्पण गरेका छन् । सामाजिक संजालमा केहीदिन अगाडि नेपाली सुरक्षा गार्डलाई निर्घात कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मलेशियास्थित नेपाली दुतावासले चासो देखाएको थियो ।
त्यसपछि दुतावासले कुटाइ खाने व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको थियो । त्यसलगत्तै दुतावासले मलेशियन प्रहरीलाई कुट्नेबिरुद्ध किटानीसमेत गरेको थियो । कुटाई खाने नवलपरासीका इस्लाम हुसेन रहेको दुतावासले जनाएको छ ।
त्यस्तै कुट्ने ब्यक्तिपनि राम गोपाल मुराउ नाम गरेका नेपाली नागरिक नै रहेका छन् । उनी मलेशियाको एक कम्पनीमा सुपरभाइजरको पोष्टमा कार्यरत रहेको दुतावासले जनाएको छ ।
हुसेन डिउटी मै रहेका बेला गत असार २३ गते कुटिएका थिए । पिडित पक्षलृ प्रहरी समक्ष किटानी गरेको थाहा पाएपछि मुराउ सोमबार आत्मसमर्पण गर्दै प्रहरीकामा आएका हुन् । घटनाबारेमा थप अनुशन्धान प्रहरीले गरिरहेको बताइएको छ ।
Prevअब मरेका मान्छेलाई पनि पुनः जिउँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी
Nextबेलका नगरपालिका प्रमुखविरुद्ध राके जुलुस
हे दैव ! अन्त्यमा केही सीप लागेन ! भर्खरै निभे कन्चन (हेर्नुस् भिडियो) (1325)